Bisha Ogaanshaha Xawaaraha: Maxay Tahay Sababta Wax Loogu Qaban Karo WebSpeed ​​Infographic
Wax yar ayaan ka qornay arrimaha saameeya awoodda websaydhkaagu u leeyahay inay si dhakhso leh u xajiyaan lana wadaagay sida xawaare gaabis ah dhaawici meheradaada. Waxaan si daacad ah ula fajacay tirada macaamiisha aan la tashanayno kuwaas oo waqti iyo xoog badan ku bixiya suuq geynta iyo istaraatiijiyadaha dhiirrigelinta - dhammaantood inta aan ku xirayo martigeliye liita oo leh degel aan ku habboonayn inuu dhaqso u raro. Waxaan sii wadeynaa inaan la socono xawaaraha boggayaga oo aan sameeyno sixitaan bil kasta si aan u yareeyno waqtiga ay qaadaneyso rarka.
Xawaaraha gaabiska ah ayaa ku jahwareersan isticmaalayaasha, saameyn ku yeelanaya iibka, waayo-aragnimada moobiilka, waayo-aragnimada macaamiisha, qiimeynta mashiinka raadinta, iyo beddelaadda; kuwaas oo dhammaantood saamayn ku leh dakhligaaga. Faahfaahintan ka socota Xirfad, wuxuu ku socdaa 12 daraasadood oo kiis ah oo muujinaya sida hagaajinta waqtiga culeyska bogga saameyn ku yeeshay natiijooyinka ganacsiga:
mPulse moobiilHeerka beddelaadku waa 1.9% marka bogagga ay ku shubtaan 2.4 ilbidhiqsi, laakiin taasi waxay ku dhacdaa 0.6 mar ay ka bataan 5.7 jeer oo rar labaad ah.
Yahoo! taraafikada ayaa kordheysa 9% haddii ay yareeyaan waqtiga xamuulka bogga 0.4 ilbiriqsi.
Amazon waxay waayi kartaa $ 1.6 bilyan oo dakhli sanadle ah sanadkasta haddii boggooda waqtiga culeyskoodu uu yahay 1 ilbiriqsi gaabis ah.
Bing waxay soo warisay in dib udhaca 2-ilbiriqsi uu horseedayo 4.3% dakhli lumiskiiba booqde, 3.75% qasabno yar, iyo 1.8% weydiimo baaris kayar.
SmartFurniture hagaajinta xawaaraha waxay ka heleen 20% taraafikada dabiiciga ah, 14% kororka aragtida bogga, iyo kordhinta qiimeynta celcelis ahaan 2 booskiiba keyword.
Dukaan shaaca ka qaaday in boggaga dhakhsaha badan ay keenaan 7% illaa 12% beddelaad ka badan bogagga gaabiska ah.
Microsoft waxay soo warinaysaa in dib udhaca 400-millisekond uu yareyn karo mugga weydiinta 0.21%.
Firefox wuxuu sheegayaa in yareynta celceliska waqtiga culeyska 2.2 ilbiriqsi ay kordhin karto soo degsashada 15.4%.
Google waxay sheegaysaa in daahitaanku ku kordhayo 100 illaa 400 milliseconds wuxuu yareeyay raadinta maalinlaha ah 0.2% iyo 0.6% siday u kala horreeyaan.
AutoA wax kasta gooyaa xawaaraha xamuulka bogga kala badh oo khibrad u leh kororka 13% ee iibka iyo kororka 9% ee heerarka beddelashada.
Edmunds xiiray 7 ilbidhiqsi oo ka baxsan wakhtiga xamuulka oo la kulmay koror 17% ah oo ku saabsan aragtida bogga iyo 3% kordhinta dakhliga xayeysiiska
Arbacada ah iyo Walmart waxay hagaajiyeen waqtigooda xawaaraha bogga, taasoo keentay koror ku dhowaad hawlgal kasta iyo qiyaasta beddelaadda goobta!
Waxaa muhiim ah in la ogaado inaadan u baahnayn inaad u hurto naqshadeynta xawaaraha. Waxaan caawinay shirkad caan ah oo caan ah oo maalgashi ku samaysay magac u yaal iyo goob gabi ahaanba qurux badan. Wakaaladda qaabeynta ee ay doorteen waxay ka dhisteen mawduuc qurux badan oo laga soo bilaabay, mashruuc aad u qaali ah. Markii ay ku soo bandhigeen goobta iibiyaha ugu sarreeya, bogagga waxay ku rarnaayeen 13 + ilbiriqsiyo, oo aan la aqbali karin inta badan isticmaalayaasha. Waxaan helnay tan arrimo ah - oo ay kujiraan qoraallo aan loo baahnayn oo lagu soo rarayo barta ballaaran, fiidiyowyo aan fiicnayn, sawirro aan la isdabarin, daraasiin qoraallo dibadeed ah, iyo xaashiyo qaabab badan leh. Toddobaadyo gudahood, waxaan ku hayney goobta oo ku socota 2 ilbiriqsiyo iyadoo la adeegsanayo xeelado dhowr ah.
Hay'addayada, DK New Media, la aqoonsaday lana saxay tan arima - oo ay kujiraan qoraallo aan loo baahnayn oo lagu soo rarayo barta ballaaran, fiidiyowyo aan fiicnayn, sawirro aan la cadaadin, daraasiin qoraallo dibadeed ah, iyo xaashiyo qaabab badan leh. Toddobaadyo gudahood, waxaan ku hayney goobta oo ku shubanaysa 2 ilbiriqsi iyada oo la adeegsanayo xeelado dhowr ah. Dayactirka goobta ma yara bedelin khibradda naqshadeynta - laakiin waxay si muuqata u wanaajisay khibradda isticmaaleha.
Tags: culusmaxcdnmpulsexamuulka boggawaqtiga rarka boggaxawaaraha boggawaqtiga xamuulka boggabogag lehxawaarahaqalabka xawaarahaqiiqxawaaraha webkaxawaaraha websaydhkawebspeed
Kaon AR: A B2B Nidaamka Xaqiiqada ah ee La Kordhiyay